ဖွံ့ ဖြိုးမှုနည်းပါးသော ဒေသများရှိ ကျောင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ဖြည့်ဆည်းပေးရန - Yangon Media Group
ဖွံ့ ဖြိုးမှုနည်းပါးသော ဒေသများရှိ ကျောင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ဖြည့်ဆည်းပေးရန
ဖွံ့ဖြိုး မှုနည်းပါးသောဒေသများရှိ ကျောင်း များ၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အလေးထား ကြောင်း ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ က ပြောကြားသည်။ အောက်တိုဘာ ၃၁ရက်တွင် ကျင်းပသော (၁ဝ)ကြိမ်မြောက်အ ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် မိတ် ဖက်နိုင်ငံများ၏ ပညာရေးဝန်ကြီး များအစည်းအဝေးကို ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယင်း ကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”အမျိုးသားပညာရေးဟာ တိုင်း ရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ ဘာသာစကား၊ သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာစေရန်၊ ဆရာများ စွမ်း ဆောင်ရည်နှင့် ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင် မှုရှိစေရန်၊ သင့်တော်တဲ့ကျောင်းသား၊ ဆရာအချိုးရရှိစေရန်၊ လူတိုင်းသင် ယူမှုအခွင့်အလမ်း ရရှိစေရန်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသော နေရာဒေသ များရှိကျောင်းများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဦးစားပေးဖြည့်ဆည်းရန်တို့ကို အ လေးထားကြောင်း အသိပေးပြော ကြားလိုပါတယ်”ဟု ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက ပြောကြားသည်။
(၁ဝ)ကြိမ်မြောက်ကျင်းပ သော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ နှင့်မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၏ ပညာရေး ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွင် အာ ဆီယံအဖွဲ့အစည်းများက ယင်းတို့ ဆောင်ရွက်နေသော ပညာရေးလုပ် ငန်းအစီအစဉ်များကို တင်ပြဆွေး နွေးခြင်း၊ အာဆီယံဝန်ကြီးများနှင့် အာဆီယံ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး တို့၏ တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းများအ ပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခြင်း၊ ရှေ့လုပ် ငန်းစဉ်များကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ အခြေခံ နှင့် အဆင့်မြင့်ပညာ၊ နည်းပညာ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင် ပညာ ရေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ကိစ္စ ရပ်များပါဝင်သော ၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁ အာဆီယံပညာရေး လုပ်ငန်းအစီ အစဉ်များကို ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယသမ္မတက ဆက်လက် ပြောကြားရာတွင် ”ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနသည် အမျိုးသားပညာရေးမဟာ ဗျူဟာစီမံကိန်း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁၏ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စွာရောက်ရှိ ရေးအတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ပညာရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒီပန်းတိုင် သည် သင်ကြားသင်ယူမှုအရည်အ သွေး၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ ကျင့်ရေး၊ သုတေသနနှင့် တီထွင် ဆန်းသစ်မှုတို့ကို သိသာထင်ရှား စွာ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရည်အသွေးရှိ ပညာရေး ပေါ်ထွန်းလာစေဖို့ဖြစ် ပါတယ်”ဟုဆိုသည်။ (၁ဝ)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ပညာရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအ ဝေးအပြီးတွင် အာဆီယံတက္ကသိုလ် များ ကွန်ရက်ပဋိညာဉ်ကို လက် မှတ်ရေးထိုးကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မတည်ငွေ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၅ဝ ဗဟိုဘဏ်နှင့် စီမံ/ဘဏ္ဍာ ခွင့်ပြုချက် ရပြီဆိုသော ရုံးစာအတုဖြင့် လိမ်??
ဂိုးသွင်းယူပြီးနောက် ချစ်သူကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့သော ဗင်နီဇွဲလား ကစားသမား
အဝေးပြေး ကားဝင်းနှစ်ခုမှ အခန်းများငှားရမ်းခ တစ်နှစ်ကျပ်သိန်း ၁၈ဝဝ ကျော် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်ရရှိ
ဘွက်ကြီး ဆည်ရေလှောင်တမံ မြေထပ်မံ နိမ့်ကျမှုကြောင့် ဆည်တာဝန်ရှိသူများက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေ?
ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်သူ သုံးဦးကို အင်ဒိုနီးရှားရဲ ဖမ်းဆီး